Kadib Wicitaankii Cristiano Ronaldo Ee Pual Pogba, Juventus Oo Real Madrid Ku Garaacaysa Saxiixa Pogba Iyo Wada Hadal U Furmay Man United. - Gool24.Net
Kadib Wicitaankii Cristiano Ronaldo Ee Pual Pogba, Juventus Oo Real Madrid Ku Garaacaysa Saxiixa Pogba Iyo Wada Hadal U Furmay Man United.
June 4, 2019 Mahamoud Batalaale
Cristiano Ronaldo ayaa sabab u noqonaya in kooxdiisii hore ee Real Madrid ay seegto saxiixa Pual Pogba kadib markii uu si toos ah u wacay xidiga reer France isla markaana uu kula taliyay in uu Juventus kula soo biiro.
Iyada oo hore loo shaaciyay in Cristiano Ronaldo uu si toos ah u wacay Pual Pogba si uu ugu qanciyo in uu Juventus kula soo biiro waxaa hadda si buuxda u soo baxay in Juventus ay wada xaajood la furtay kooxda Man United.
Sky Sports Italy ayaa shaaciyay in kooxda Juventus ay hadda wada xaajood la furtay Man United si ay dib ugula saxiixato xidigii hore ee kooxdeeda ee Pual Pogba kaas oo markii hore ay Real Madrid si wayn u doonaysay.
Wargayska Diario Gol oo Spain ka soo baxa ayaa sidii aanu hore idiinku soo gudbinay waxa uu shaaciyay in Pual Pogba uu wicitaan ka helay Cristiano Ronaldo isla markaana uu u sheegay sida uu u doonayo in uu Juventus kula soo biiro.
Juventus ayaa hore uga mid ahayd kooxihii sida wayn u doonayay saxiixa Pual Pogba markii ay Jose Mourinho isku dhacsanaayeen laakiin intii ka danbaysay Real Madrid ayaa ahayd kooxda inta ugu badan lala xidhiidhinayay.
Pual Pogba laftiisa ayaa saxaafada ka hor qirtay in ciyaartoy kastaaba uu ku riyoodo in uu Zidane kula shaqeeyo Real Madrid wuxuuna ka mid yahay ciyaartoyda uu Zidane laftiisu muujiyay in uu jecel yahay la shaqayntooda.
Laakiin Diaro Gol ayaa lagu shaaciyay in hadda Pual Pogba in badan ku qanacsan yahay in uu markale xidho maaliyada kooxdiisii hore ee Juventus kadib markii uu wicitaanka ka helay Cristiano Roanldo.
Warkii ugu horeeyay ee uu Diario Gol ku shaaciyay wicitaanka Ronaldo ayaa lagu yidhi: “Pogba waxa uu wicitaan ka helay Cristiano Ronaldo kaas oo isaga uga warbixiyay sida ay kooxda reer Talyaani u soo kacayso si ay xili ciyaareedka 2019/2020 ugu guulaysato Champions leauge, waxayna u muuataa in xidiga reer France uu in badan ku qancay in uu markale xidho maaliyada Juventus”.
Warkan ayaa walwal ku abuuri kara maamulka Real Madrid iyo Zidane haddii ay tahay in sida uu yahay loo rumaysto, laakiin xataa haddii uu Ronaldo awooday in uu Pogba ku qanciyo in uu Juventus kula soo biiro wali waxaa hadhsan in kooxaha Juventus iyo Man United ay wada xaajood adag yeeshaan.
Si kastaba ha ahaatee, waiilka Pual Pogba ee Mino Raiola oo lacag waali ah hore uga helay heshiiskii rekoodhka aduunka ahaa ee uu Pogba uga soo wareegay Juventus ee uu Man United ugu soo biiray ayaa markale doonaya in uu dilaalo heshiiskan.